IFactory yoMboneleli weCrucible yoMgangatho woDongwe-XTL
I-Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd yasekwa ngo-2009 .Siyinkampani yobuchwephesha beceramic ekhethekileyo enamalungelo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle. Fumana ukwamkelwa yi ISO9001& ROHS.
Njengomenzi onamandla ochwephesha wokuvavanywa komlilo, sine-7000 yeemitha zesikwere sokwakha umzi-mveliso omtsha kunye nomgca wemveliso ozenzekelayo.
Siyimo yolawulo olungqongqo lwemveliso, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso ngamnye.
Uhlalutyo lovavanyo lomlilo ngokwenene yindlela yokuvavanya esebenzisa i-crucible okanye i-cupel njengesitya.
I-Assay crucible ikwabizwa ngokuba yi-melting crucible yegolide, i-alchemy crucible yegolide, i-crucible yodongwe, i-crucible yodongwe ye-mullite, i-crucible frequency crucible.
Iimpawu zeMveliso: ukuchasana okuphezulu, ukumelana nokubola okuhle, akukho slagging, akukho kungena, akukho kuqhekeka, akukho zinto zegolide nezesilivere ezinokwenza iziphumo zovavanyo zichaneke ngakumbi, sisixhobo sodidi lokuqala lovavanyo lomlilo, kwaye alukhubazeki xa lushushu. amaqondo okushisa aphezulu Okanye ukuwa, kunokugcina amandla okwaneleyo kwiqondo lokushisa eliphezulu, akuyi kuphuka xa i-tongs okanye ifolokhwe iphuma, inokuxhathisa ukukhukuliseka kwenyibilika, iqinisekise ukuba i-crucible ayivuzi, isebenzise amaxesha angama-5, ayiyi kuqhuma, refractoriness yi 1600 degrees, kwaye umthwalo ithambe Ubushushu 1400 degrees.
Ukuhlolwa kwezinto ezikrwada
Ixabiso:Iimveliso zethu zithelekisa ngokufanelekileyo nabanye abarhwebi.
I-1.Oem okanye i-odm yamkelekile.
I-2.Siyamkela i-odolo encinci / isilingo somthengi ukujonga ukuba ngaba iimveliso zifanelekile kwimarike.
3.Iza kufumaneka kwi-intanethi ye-almot kwiinkonzo zeeyure ze-24 kwinkampani yakho ehloniphekileyo.
4.Siyavuya ukuva kuwe kungekudala kwaye uqalise ubudlelwane beshishini kunye nenkampani yakho yokuhlonipha.
Ukuba uneminye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
i-crucible yokunyibilika i-ceramic crucible